Fiteny ao Eorôpa - Wikipedia
Ny fiteny ao Eorôpa dia ireo fiteny ampiasain' ny vahoaka samihafa mponin' i Eorôpa amin' ny fiainany andavananadro. Ny ankamaroan' ireo fiteny ireo dia ao amin' ny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana, manarakaraka azy ireo ny fiteny ao amin' ny fianakaviam-piteny finô-ogriana. Ahitana fiteny ao amin' ny fianakaviam-piteny torkika koa ao. Ao Kaokazy dia mitana ny anjara toerany lehibe ny fianakaviam-piteny abkazô-adigiana, ireo fiteny nakô-dagestaniana ary ireo fiteny kartveliana. Ao koa ireo fiteny izay ampiasan' olona vitsy dia vitsy (toy ny fiteny baska) izay fiteny manirery, fa ny fiteny maltey kosa no hany fitenim-pirenena ao Eorôpa isan' ny fiteny semitika. Maro koa ireo fiteny nampiasain' ny olona taloha tao Eorôpa izay lasa teny maty ankehitriny fa ny sasany kosa tandindomim-pahafatesana.
Sarin-tany maneho ny faritra ao Eorôpa itenena indrindra ireo fiteny ao
1 Fiteny indô-eorôpeana
1.1 Fiteny jermanika
1.2 Fiteny rômana
1.3 Fiteny balta
1.4 Fiteny slava
1.5 Fiteny seltika
1.6 Fiteny indô-eorôpeana hafa manirery
2 Fiteny tsy indô-eorôpeana
2.1 Fiteny kaokaziana
2.2 Fiteny oraliana
2.3 Fiteny semitika
2.4 Fiteny torkika
2.5 Fiteny môngôlika
Ny fiteny indô-eorôpeana tenenina ao Eorôpa dia mitsinjara ho fianakaviam-piteny efatra, dia ny fiteny jermanika, ny fiteny rômana, ny fiteny balta ary ny fiteny slava (ireo roa ireo dia akamban'ny ankamaroan' ny mpahay teny ao amin' ny vondrom-piteny baltô-slava), nefa misy koa ireo fiteny maro ampiasain' ny mponina vitsy. Ampahatsiahivina fa ny fiteny indô-eorôpeanina dia fianakaviam-piteny ivondronan'ny fiteny maro any Eorôpa sy any India ary any Iràna sy ny manodidina.
Ny fiteny jermanika dia fitenin' ny vahoaka jermanika izay nonina tao amin'ny ampahany avaratra-atsinanan' ny Empira romana taloha. Ny fiteny jermanika be mpiteny indrindra dia ireo ao amin' ny sampana andrefana dia ny fiteny anglisy sy ny fiteny alemàna sy ny fiteny neerlandey ary ireo fiteny skandinaviana toy ny fiteny soedoà sy ny fiteny danoà ary ny fiteny nôrveziana.
Ny fiteny rômana dia ny fiteny frantsay, ny fiteny italiana, ny fiteny portogey ary ny fiteny espaniôla.
Ny fiteny balta dia ireo fiteny ao amin' ny vondrom-piteny baltô-slava, ka isan' izany ny fiteny litoaniana, ny fiteny letôna, ny fiteny korôniana, ny fiteny selôniana, ny fiteny semigaliana, ny fiteny skalviana ary ny fiteny sodôviana. Ampiasain' ny olona 6 000 000 any ho any ny fiteny balta. Ny fiteny litoaniana (izay tenenin' ny ankamaroan' ny olona ao Litoania) sy ny fiteny letôna (tenenia ao Letônia) no mbola ampiasain' ny olona ankehtriny. Maro ny fiteny maty ao amin' io vondrom-piteny balta io.
Ny fiteny slava dia ireo fiteny amin' ny vondrom-piteny balto-slava, tenenin' ny olona monina amin' ny firenena maro ao Eorôpa afovoany sy ao Eorôpa atsinanana. Miisa 315 000 000 any ho any ny olona miteny slava.
Mizara fianakaviana telo ireo fiteny slava ireo:
Ny fiteny rosiana, ny fiteny bielôrosiana, ny fiteny rotena na rosina ary ny fiteny okrainiana dia ao amin' ny fianakaviam-piteny slava tsinanana.
Ny fiteny tseka, ny fiteny slôvaka, ny fiteny soraba ary ny fiteny pôlôney sy ireo fiteny lesitika tahaka azy (fiteny kasoba, polaba, slovitsa ary silesiana) dia ao amin'ny fianakaviam-piteny slava andrefana.
Ny fiteny serbô-krôata (fiteny krôata na krôatiana, bôsniana, môntenegrina, serba) sy ny fiteny bolgara, ny fiteny makedôniana ary ny fiteny slôvena dia isan' ny fianakaviam-piteny slava atsimo.
Ny fiteny keltika na fiteny seltika dia vondrom-piteny misampana roa, ka ahitana ireo fiteny keltika an-tanibe sy ireo fiteny keltika a-nosy (ireo fiteny gaelika sy ireo fiteny britônika).
Ny fiteny keltika an-tanibe dia fiteny maty ankehitriny, dia ireto avy: fiteny gaoloà, fiteny lepontika, fiteny keltibera, fiteny galatiana (na galata), fiteny norika;
Ny fiteny keltika an-nosy dia mbola ampiasaina ao amin' ny tapany avaratra-andrefan' i Eorôpa, ka misy mpiteny 1 500 000 any ho any, izay ahitana ireo fiteny gaelika (fiteny ekôsey, fiteny irlandey, fiteny gaelga) sy ireo fiteny britônika (fiteny galoà na kimrika, fiteny kôrnika, fiteny bretôna).
Fiteny indô-eorôpeana hafa manireryHanova
Maro koa ireo fiteny ao Eorôpa izay tsy azo akambana izay sady tsy azo akambana ao amin' ireo fianakaviam-piteny voalaza eo aloha no tsy azo atambatra ho fianakaviana iray, ka ireto ny be mpampiasa:
ny fiteny albaney tenenina ao Albania sy ao Kôsôvô ary ao amin' ny tany manodidina (Grisia, Môtenegrô, Makedônia) amin' ny endriny roa, dia ny fiteny gega sy ny fiteny tôska;
ny fiteny armeniana izay tenenina ao Armenia sy ao Karabaga-Ambony;
ny fiteny grika vaovao, izay tenenina indrindra ao Grisia sy ao Kipra (na Sipra), izay hany misolo tena ny fianakaviam-piteny helenika (ny ankamroan' ny fiteny ao dia fiteny maty daholo);
ny fiteny ôseta (na ôsetiana), tenenin' ny vahoaka ôseta (na ôsetiana) ao amin' ny tapany avaratr' i Kaokazy, izay isan' ny fianakaviam-piteny iraniana;
Ny fiteny rômany, ampiasain' ny ankamaroan' ny Rômany (izay atao hoe Bôhemiana, Zitàna, Rômanisela, na Tsigana) miorim-ponenana ao Eorôpa, izay ao amin' ny fianakaviam-piteny indô-ariana, avy any India.
Fiteny tsy indô-eorôpeanaHanova
Ampiasain' ny olona monina ao Eorôpa koa ny fiteny maro tsy isan' ny fianakaviam-piteny indô-eorôpeana, dia ireo ao amin'ny fianakavian' ny fiteny kaokaziana, fiteny oraliana, fiteny semitika, fiteny torkika ary fiteny môngôliana.
Ny fiteny kaokaziana dia ivondronan' ny fiteny ao amin' ny faritr' i Kaokazy. Mizara zana-bondrona telo izy:
fiteny kaokaziana avaratra-andrefana (atao hoe fiteny abkazô-adigeana), izay tenenina any Jeôrjia, any Rosia ary any Torkia, ka ahitana ny fiteny abkazy, ny fiteny abaza, ny fiteny kabarda ary ny fiteny adigeana; fiteny kaokaziana avaratra-atsinanana (atao hoe fiteny nakô-dagestaniana); izay tenenina ao amin' ireo Repoblika kaokaziana any Rosia sy any amin' ny tapany avaratr' i Azerbaijana;
ahitana fiteny ampolony maro sy fitenim-paritra maro, ka isan' izany ny fiteny tsetsena, ny fiteny ingosy, ny fiteny lezgiana ary ny fiteny dargoa;
fiteny kaokaziana atsimo (atao hoe fiteny kartveliana), izay ampiasain' ny olona 5 000 000 any ho any monina ao Jeôrjia sy any Torkia avaratra, ka ny fantatra indrindra dia ny fiteny jeôrjiana, ny fiteny lazy, ny fiteny mingreliana ary ny fiteny svana;
Ny fiteny oraliana dia mamondrona ireo fiteny maro miely amin' ny faritra ara-jôgrafia tapatapaka eo anelanelan' i Eorôpa Afovoany sy i Siberia. Ny tena hita ao Eorôpa dia ireo fiteny ao amin' ny zana-bondrona finô-ogriana. Mizara telo indray ity zana-bondrona ity:
ireo fiteny ogriana, izay ahitana ny fiteny hongariana (na fiteny hôngroà) any Hongaria (na Hôngria) sy ao amin' ny firenena eorôpeana maro manakaiky azy (Slôvakia, Aotrisy, Slôvenia, Serbia, Romania, sns);
ireo fiteny finô-permiana izay mamondrona ireo fiteny sama (ao avaratr' i Fenôskandia) sy ireo fiteny fenika (fiteny finoà, fiteny estôniana, fiteny kareliana) ary fiteny maro tetenina ao amin' ny tapak' i Rosia ao Eorôpa (fiteny môldavy, fiteny permiana, fiteny mary, sns).
Ny fiteny maltey no hany fiteny semitika tenenina ao Eorôpa manana ny satan' ny fiteny ôfisialy. Olona miisa 400 000 any ho any no miteny maltey (ao Malta). Izy no hany tenim-pirenen'i Malta sady, miaraka amin'ny fiteny anglisy, iray amin'ny fiteny ofisialy roan' io firenena io. Iray amin' ireo fiteny ofisialy miisa 24 an' ny Vondrona Eoropeana. Io ihany koa no hany fiteny semitika soratana amin'ny tarehin-tsoratra latina.
Ity fianakaviam-piteny torkika ity dia tenenin' ny olona miisa 200 000 000 any ho any maneran-tany, nefa ny fiteny sasany aminy ihany no tenenina ao Eorôpa: ny fiteny torka ao amin' ny tapak' i Torkia ao Eorôpa sy any Kipra (na Sipra); ny fiteny azery na azerbaijaney ao Azerbaijana sy ao Degestana; ny fiteny kazàka ao amin' ny tapany eorôpeanan' i Kazakstana; ny fiteny tatara ao Tatarstana (federasionan' i Rosia) sy any Krimea. Ahitana fiteny torkika tenenin' olona vitsy dia vitsy koa ny ao Kaokazy Avaratra, dia ny fiteny karatsaivô-balkara sy ny fiteny komika.
Tenenina ao Kalmokia (ao akaikin' ny faritr' i Volga ambany) ao amin' nby Federasionan' i Rosia) ny fiteny kalmoka, izay hany fiteny môngôliana ao Eorôpa.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiteny_ao_Eorôpa&oldid=999695"
Dernière modification le 3 Janoary 2021, à 07:07
Voaova farany tamin'ny 3 Janoary 2021 amin'ny 07:07 ity pejy ity.